Semalt बाट5सुझावहरू कसरी स्क्र्याप बिंग, याहू र गुगलमा
खोज इन्जिन स्क्र्यापिंग मेटा विवरण, वेब सामग्री, र खोज इञ्जिनहरूबाट URL हरू स्क्र्याप गर्ने वा फसल गर्ने प्रक्रिया हो। यो वेब स्क्र्यापिंगको एक विशेष रूप हो र यो बिंग, गुगल, र याहूलाई समर्पित छ। सबै एसईओ कम्पनीहरू र वेबमास्टरहरू गुगलबाट कुञ्जी शब्दहरू निकाल्न खोज इन्जिन स्क्र्यापरहरूमा निर्भर छन्। उनीहरू आफ्नो प्रतिस्पर्धी को साइट को रैंकिंग र आफ्नो कार्यक्षमता सुधार गर्न विभिन्न रणनीति लागू।
गुगल - सबैभन्दा ठूला र प्रमुख खोजी ईन्जिन:
गुगल विज्ञापनदाता र प्रकाशकहरूको ठूलो संख्याको साथ सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा प्रख्यात खोज इञ्जिन हो। यस खोज इन्जिनले वेब पृष्ठहरूको सूचकांक गर्न विभिन्न स्क्रैपरहरू र क्रलरहरू प्रयोग गर्दछ र विभिन्न साइटहरूको सामग्री गुणस्तर अनुगमन गर्दछ। खोजी ईन्जिनहरूले वेब स्क्र्यापिंगको विरूद्ध कुनै कार्य लिदैनन्। वास्तवमा तिनीहरू विभिन्न सफ्टवेयर र उपकरणहरूमा निर्भर हुन्छन् तिनीहरूका कार्यहरू गर्नका लागि। कुञ्जीशब्दहरू र प्यारामिटरहरूमा निर्भर गर्दै उनीहरूले विभिन्न वेब पृष्ठहरू सूचकांक गर्न एउटा जटिल प्रणाली प्रयोग गर्दछ।
गुगल, बिंग, र याहू स्क्र्याप गर्न पाँच सुझावहरू:
तपाईं साधारण विधिहरू वा उपकरणहरूको साथ खोज इन्जिन स्क्र्याप गर्न सक्नुहुन्न। गुगल, बिंग, र याहूबाट जानकारी लिनका लागि तपाईले समय र समय दुबैमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेछ। यदि तपाईं गम्भीर रूपमा आफ्नो साइटको खोजी ईन्जिन स्तर निर्धारण गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईंले छोटो समयमा ठूलो संख्यामा कुञ्जी शब्दहरू स्क्र्याप गर्नुपर्नेछ। दुर्भाग्यवस, तपाई यस कार्यलाई परम्परागत वेब स्क्र्रापरहरू जस्ता Import.io र किमोनो ल्याबहरूसँग गर्न सक्नुहुन्न। आईमैक्रोस एक नि: शुल्क ब्राउजर स्वचालन टूलकिट हो जुन खोज ईन्जिनबाट डेटा स्क्र्याप गर्न प्रयोग गरिन्थ्यो। यो Import.io, किमोनो ल्याबहरू, र अन्य सामान्य वेब स्क्र्यापि tools उपकरणहरू भन्दा धेरै उत्तम छ र यूआरएलहरू, वर्णनहरू, र कुञ्जीशब्दहरू सजीलै निकाल्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
१. आईपी रोटेशन:
तपाइँ खोज साइटहरु लाई रोक्नको लागि विभिन्न प्रोक्सीहरु प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईले वेब स्क्रेपर वा डाटा माइनर छनौट गर्नुहोस् जुन यो सुविधा निःशुल्क प्रदान गर्दछ। उदाहरण को लागी, Mozenda हामीलाई आईपी रोटेशन को सुविधा प्रदान गर्दछ र हामीलाई अज्ञात नेट मा कार्य गर्दछ।
२. तपाइँको समय प्रबन्ध गर्नुहोस्:
यो उल्लेख गर्न सुरक्षित छ कि उचित समय प्रबन्धन सफलताको कुञ्जी हो। तपाईंले आफ्नो समय कुञ्जी शब्द परिवर्तनहरू र सामग्री पेजिनेसन बीचमा विभाजन गर्नुपर्छ। यसले तपाइँको साइटको खोज इञ्जिन श्रेणीकरण सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। तपाईले यो सुनिश्चित गर्नुपर्दछ कि सबै कुञ्जीशब्दहरू ठीक ठाउँमा राखिएको छ, र दुबै छोटो-पुच्छर र लामो पुच्छर कुञ्जीशब्दहरूको राम्रो संयोजन छ।
Hand. यूआरएल प्यारामिटरहरू ह्यान्डल गर्नुहोस्:
तपाईंले ध्यानपूर्वक यूआरएल प्यारामिटरहरू सम्हाल्नु पर्छ। कहिलेकाँही कुकीहरू, redirects, र HTTP हेडरहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नु राम्रो हुन्छ। यसले अन्तत: तपाईंको साइटको बाउन्स रेटलाई कम गर्दछ र यसको खोज इञ्जिन स्तर निर्धारण गर्दछ।
HTML. HTML डोम पार्सि::
यो महत्वपूर्ण छ कि URL हरू, मेटा ट्यागहरू र वर्णनहरू जुन तपाईंको साइटसँग सम्बन्धित छैन। यस बीच, तपाईंले HTML र DOM पार्सिंग, आन्तरिक र बाह्य लिंकहरू, र HTML कोडहरूमा ध्यान दिनुपर्दछ। साथै, नियमित आधारमा सबै भ broken्ग भएका लिंकहरू र त्रुटिहरू ठीक गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।
Your. तपाईको साइटबाट सबै शंकास्पद प्रयोगकर्ताहरू रोक्नुहोस्:
तपाईं क्याप्चा, कुकिज, र रिडिरेक्ट्स को लागी हैकर्स र स्प्यामरबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ। यसैबीच, तपाईंले एक उपकरण छनौट गर्नु हुन्छ जसले तपाईंको साइटबाट शicious्कास्पद प्रयोगकर्ताहरूलाई रोक्न मद्दत गर्दछ।